बीबीएस चौथो बर्षमा अध्यनरत कमललाइ लकडाउनको बेला आइलाग्यो ठुलो बज्रपात ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १६:३७
सहयोगको लागि ‘कमल बचाऔं’ अभियान सुरु गरेपछि बिभिन्न ठाउँबाट केहि रकम उठेको छ । चपरगौढ़ी घर भै हाल इजरायलमा रहेका दिपक छेत्रीले सहयोग गर्न सबैलाई अपिल समेत गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेख्दै भनेका छन्, मेरा सम्पूर्ण साथीभाइ , दिदिबहिनी अनि परिचित अपरिचित सबैलाई उनिको उपचार प्रक्रियामा सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु । सानो सहयोगले ती प्रतिभाशाली युवकको ज्यान बच्न सक्नेछ , मानवता बच्न सक्नेछ । उनलाई सहयोग गर्न कोहलपुर स्थित मेघा बैँकको शाखा कार्यालयमा रहेको खाता नं. ०७३००५००१७३२९ मा सहयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।